Amiirad Margriet oo u dhalatay Netherlands ayaa ku magacawday Godmother of Rotterdam cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Amiirad Margriet oo u dhalatay Netherlands ayaa ku magacawday Godmother of Rotterdam cusub
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Italy War Deg Deg Ah • Wararka Raaxada • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Holland America Line waxay u magacowday Boqoraddeeda Sarraynta Boqortooyada Margriet ee Holand Hooyadii Rotterdam.
Xubno dheeraad ah oo ka tirsan Qoyska Boqortooyada Nederland ee ilaah-hooyooyinka ah waxaa ka mid ah Boqoradda Máxima, oo magacawday Koningsdam sannadkii 2016-kii iyo Nieuw Amsterdam sannadkii 2010. Markaas-Boqoradda Beatrix waxay u adeegtay ilaahadda Eurodam sannadkii 2008. Rotterdam V waxaa billowday 1958-kii Boqoradda Juliana. Kadib-Princess Beatrix waxay magacawday Statendam IV 1957 iyo Prinses Margriet 1960. Nieuw Amsterdam II waxaa bilaabay Queen Wilhelmina 1937.
Rotterdam wuxuu calaamad u yahay markabkii 13aad ee khadadka doonta ee loogu magac daray Royal Dutch.
Xiriirka Holland America Line ee Guriga Orange wuxuu dib ugu soo laabanayaa ku dhawaad ​​qarni ilaa Prince Hendrik oo bilaabay Statendam III 1929kii.
Xubnaha Qoyska Boqortooyada Nederland waxay bilaabeen 11 maraakiib oo kale ah Holland America Line sanadaha oo dhan.
Holland America Line ayaa maanta ku dhawaaqday in marka Rotterdam loo magacaabo guga soo socda, Her Royal Highness Princess Margriet oo u dhalatay Netherlands ayaa noqon doonta ilaah -markabka, oo wadata dhaqan soo bilowday 1920 -kii.
Rotterdam ee Holland America
Khadka Holland AmericaXiriirka uu la lahaa The House of Orange wuxuu dib ugu soo laabanayaa ku dhawaad ​​qarni ilaa Prince Hendrik oo bilaabay Statendam III 1929. Tan iyo markaas, xubnaha Qoyska Boqortooyada Nederland waxay bilaabeen 11 maraakiib oo kale ah Holland America Line sanadaha oo dhan, oo ay kujirto Her Royal Highness Princess Margriet oo lagu magacaabo Prinsendam (1972), Nieuw Amsterdam III (1983), Rotterdam VI (1997) iyo Oosterdam (2003).
"Waxaan si qoto dheer uga mahadcelineynaa in Boqoraddeeda Sare ee Princess Margriet ay mar kale u dhaqmi doonto sidii hooyadii Khadka Holland America Markab, oo la socda dhaqan dheer oo ay la leeyihiin Qoyska Boqortooyada oo sii wadaya sharfidda xididdadayaga Nederland, ”ayuu yiri Gus Antorcha, madaxweynaha Holland America Line. “Rotterdam waxaa lagu magacaabi doonaa Rotterdam sannadka soo socda, iyada oo u dabbaaldegi doonta magaaladeeda magaca leh iyo xiriirka taariikhiga ah ee aan la leenahay Netherlands. Waxaan rajeyneynaa inaan xusno munaasabadda halka ay wax walba ka bilowdeen Khadka Holland America. "
Doomaha Rotterdam ee ugu horreeya waxay ka baxaan Oktoobar 20, 2021, iyagoo ka yimid Amsterdam, Netherlands, waxayna bilaabayaan safar 14 maalmood ah oo ku-meel-gaadh ah oo ku aaddan Fort Lauderdale, Florida. Intii lagu gudajiray xilli-ciyaareedkii Kariibiyaanka ee bilowga ahaa laga bilaabo Nofeembar ilaa Abriil, Rotterdam wuxuu ka soo shiraacan doonaa shan illaa 11 maalmood oo safarro ah oo ku teedsan koonfurta, galbeedka, bariga iyo gobollada kulaylaha, dhammaantoodna ka soo wareega Fort Lauderdale. Bartamihii Abriil, markabku wuxuu sameeyaa 14 maalmood oo Badweynta Atlantikada ah oo uu dib ugu laabto Yurub si uu xagaaga ugu qaato Norway, Baltic, Isles British iyo Iceland, dhammaantoodna waxay ka soo shiraacdaan Amsterdam.
Rotterdam waxaa dhiibay Doonnida Fincantieri Talyaaniga 30 -ka Luulyo, 2021. Taariikhda loogu magacdaray markabka Rotterdam waxaa lagu dhawaaqi doonaa bilaha soo socda.